सरकारी वार्ता टोलीले समय नदिँदा वार्तामा ढिलाई - २३ आश्विन २०७७, NepalTimes
सरकारी वार्ता टोलीले समय नदिँदा वार्तामा ढिलाई
२३ असोज, काठमाडौँ । सरकारी वार्ता टोलीले समय नदिँदा सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीचको वार्तामा ढिलाई भएको छ । शुक्रबार बिहानैबाट वार्ता थाल्ने भने पनि सरकारी वार्ता टोलीले समय नदिएको डा. केसी पक्षको वार्ता टोलीको भनाई छ ।
दुवै वार्ता टोलीले वार्ता सकारात्मक रहेको र निर्ष्कष उन्मुख रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकारी पक्षले सयम दिए जुनकुनै वार्तामा बस्न र मागबारे छलफल गर्न तयार रहेको उनले जनाए ।
सरकारी वार्ता टोलीले भने केसीका मागबारे प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायसँग परामर्श भइरहेको जनाएको छ ।